ဆန်နီနေမင်း: သောတာပန်နဲ့ပတ်သတ်၍ သိကောင်းစရာများ(၂)
မေး။ ။ တစ်ခုထပ်မံလျှောက်ထားလိုသည်မှာ “ဘုံစဉ်စံ”ဟူသော စကားလုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုစကားလုံးဟာ သောတာပန်တည်ပြီးသူတို့ကို ဆိုလိုသောစကားလုံးသာဖြစ်ပါသလားဘုရား။ ထိုသို့ဖြစ်သည်ရှိသော် လူသောတာပန်အရိယာသေပြီးလျှင် အထက်ဘုံတို့ကိုသာ ဘုံစဉ်စံ တက်သွားမည်ဖြစ်၍ လူ့ဘုံ၌ တဖန်ပြန်၍ ပဋိသန္ဓေ မဖြစ်ရတော့ဟူ၍ မှတ်ယူရမည်လော။ ရှင်းလင်းပြသပေးတော်မူပါအရှင်ဘုရား။
ဖြေ။ ။ သောတာပန်အမျိုးအစားတွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာ-လူ့ဘ၀မှာပဲ (၇)ကြိမ်လုံးဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးဘ၀မှာမှ ရဟန္တာဖြစ်မဲ့သူ၊ နတ်ပြည်မှာပဲနေပြီး ရဟန္တာဖြစ်မဲ့သူ၊ လူပြည်လာပြီး နတ်ပြည်မှာ ရဟန္တာဖြစ်မဲ့သူ။ နတ်ပြည်ကနေ သကဒါဂါမ်ဖြစ်ပြီး သုဒ္ဓ၀ါသဗြဟ္မာပြည်မှာ ရဟန္တာဖြစ်မဲ့သူစတာတွေ အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုကွဲပြားရသလဲဆိုတော့ သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ (၇)ဘ၀တိတိ ကြိုက်တဲ့ဘုံတွေမှာ ကြိုက်သလိုသွားလာနိုင်ခွင့်ရှိလို့ မိမိနှစ်သက်တဲ့ဘ၀တွင် အဆင့်တတ်ပြီး ရဟန္တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ဘ၀ကနေ နောက်ထပ်(၇)ဘ၀ထိပဲ သံသရာထဲမှာ ကျင်လည်ရမှာပါ။ ဒါဟာလည်း မိမိတို့ အားထုတ်မှုအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း တစ်ဘ၀ပဲကူးပြီး နောက်ဘ၀မှာ ရဟန္တာဖြစ်အောင် လုပ်ကြပါတယ်။ တချို့ကျတော့ နှစ်ဘ၀နေတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း (၇)ဘ၀ထိနေထိုင်ကြကာ (၇)ဘ၀နောက်ဆုံးမို့ နောက်ဆုံးဘ၀ကျမှ ရဟန္တာဖြစ်အောင် အားထုတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို ကွာခြားရတဲ့အကြောင်းကတော့ ၀ိပဿနာအားထုတ်မှု အားကောင်းမကောင်းပေါ်မှာ မူတည်သလို ပါရမီနည်းများပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၀ိပဿနာအားထုတ်မှုအားကောင်းတဲ့သူ၊ ပါရမီကောင်းတဲ့သူဟာ တစ်ဘ၀ကူးပြီး ရဟန္တာဖြစ်သလို အားမကောင်းတဲ့သူကတော့ (၇)ဘ၀ထိနေထိုင်ပြီးမှ ရဟန္တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ကိလေသာများ ကြွင်းကျန်သေးသော်လည်း အပါယ်လားကြောင်း မကောင်းမှုတို့ကို ပြုလုပ်ခြင်းမရှိတာကြောင့် အပါယ်သို့လားရခြင်း သဘောမရှိတော့ပါ။ ဒါပြင် အောက်သို့လျှော့ကျရိုးထုံးစံမရှိဘဲ အထက်မဂ်ကိုသာ တက်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ ယခင်ဘ၀က သောတာပန်ဖြစ်ပြီးသူများဟာ ယခုဘ၀တွင် သကဒါဂါမ်စတဲ့ အထက်မဂ်ဖိုလ်ကိုသာ ရဖို့အကြောင်း ရှိပါတော့တယ်။ ယခင်ဘ၀က သောတာပန်ဖြစ်ပြီးသူဟာ မဂ်ရဲ့နိယာမသဘောအရ မွေးကတည်းက သောတာပန်အဖြစ် မွေးဖွားလာသောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က တရားတစ်ပုဒ်ဟောပြီးတိုင်း သောတာပန်ဖြစ်ကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင် ယခင်ဘ၀က သောတာပန်ဖြစ်ပြီးသူများ မပါပါ။ အရင်ဘ၀က သောတာပန်ဖြစ်ခဲ့သူများဆိုရင်လည်း အထက်မဂ်ဗိုလ်ဖြစ်တဲ့ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာများ ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။
I would like to invite you all to come and listen to Myanmar Music at my site. I have many Myanmar Songs and Myanmar Mp3 collected on my site.Myanmar Online Music: http://www.myanmaronlinemusic.com/Thanksalot!
Thank you so much . ..
တရားမှတ်ရင်းနဲ့သောတာပန်တည်သူတွေ အများကြီးပါ။ ဘုရားရှင်ကို မမြင်ဖူးဘဲနဲ့ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို ကြားဖူးရုံနဲ့ တရားမှတ်တာ သောတာပန်တည်သူတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။